> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray ama la tirtiro Xogta laga HTC 8X / 8 jir
Iyada oo ku saleysan dambeeyay Windows Phone 8 OS ah, HTC ayaa sii daayay 2 smart cusub telefoonada: HTC 8X iyo HTC 8 jir. Inkastoo tayada sare ee shaashadda. Windows Phone 8 OS waxay keentaa users aragnimo gebi ahaan cusub.
Si kastaba ha ahaatee, sida inta badan dadka isticmaala telefoonka smart, laga yaabo inaad la kulanto photos khasaaraha iyo dhibaatada gaartay videos. Waxaad ka raadsan lahaa internet-ka in ay xal u soo kabsado aad sawiro laga badiyay ama la tirtiro iyo videos ka HTC 8X ama HTC Rio heli.
Waa in aad ka heli barnaamijyo badan laakiin waxaan u soo jeedin lahaa in aad isku daydo inaad la Wondershare Photo Recovery ama Wondershare Photo Recovery for Mac . Barnaamijkan waxa ay awoodaan in ay soo kabsadaan music, sawiro iyo videos ka HTC 8X iyo HTC 8 jir, ma files arrinta lumay ay sabab u tahay tirtirka shil ah, formatting ama xataa musuqmaasuqa. Waxa aad bixisaa version Ibtilo baarista HTC 8X / Rio ama Kaararka SD ah oo iyaga ka hor soo kabasho.
Waxaad kala soo bixi kartaa version tijaabo ah ugu horeysay Wondershare Photo Recovery ka dibna bilowdo HTC 8X / Rio ka Data Recovery.
4 Talaabada inuu ka soo kabsado Khasaaray ama la tirtiro Photos / Videos / Music ka HTC 8X / Rio
Fiiro gaar ah: Halkan waxaan isku dayi Wondershare Photo Recovery for Windows. Wixii user Mac, fadlan kala soo bixi version Mac, hawlgalka waa la mid.
Tallaabada 1 Daahfurka barnaamijka iyo xiriiriyaan HTC 8X / Rio la computer
Halkan waxa aad ku arki doonaa interface ku bilaabatay sida image hoose. Dhammaan qalabka ay taageerayaan lagu soo bandhigi doonaa interface this. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in guji "Start" si ay u bilaabaan dib u soo kabashada.
Fiiro gaar ah: Fadlan hubi in aad kaarka HTC 8X / Rio ama SD waxaa laga garan karaa your computer sameeyo.
Tallaabada 2 Dooro HTC 8X / Rio in iskaan files.
Halkan dhan qoruhu iyo qalabka dibadda ku xiran your computer oo dhan lagu soo bandhigi doonaa. Waxaad dooran kartaa mid ka mid ah aad HTC 8X / Rio ka dibna riix "Scan".
Fiiro Gaar ah: Waxa kale oo aad kala miiri karaa natiijada scan by click "Filter Options" ayaa salka ku jira.
Tallaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh helay files
Scan ka dib, dhammaan faylasha helo waa la soo bandhigi doonaa qaybaha. Waxaad ku eegaan kartaa sawirro aad ka hor soo kabashada. Wixii muusig iyo cajallado fiidyow, waxa kale oo aad eegi kartaa magacyadooda asalka ah. Plus, waxa kale oo aad ka raadin kartaa faylasha aad rabto in aad si dhakhso ah oo hufan soo kabsado.
Fiiro gaar ah: Haddii aad ka heli faylasha aad rabto in aad soo kabsado inta lagu jiro habka scan, waxa kale oo aad "hako" ama "Jooji" on dhankiisii ​​midig sare inuu ka soo kabsado karo files helay isla markiiba.
Tallaabada 4 Ladnaansho xogta HTC 8X / Rio sida aad rabto
Ka dib markii xulashada faylasha aad rabto in aad dib u soo kabashada, waxaad riixi kartaa "Recovery" in rstore faylasha soo kabsaday.
Fiiro gaar ah: Fadlan dooro meel cusub si loo badbaadiyo files soo kabsaday. Haddii kale dib u soo kabashada guuldareystaan ​​laga yaabaa.